Shiinaha Smart 5 qaababka Qaangaarka Sonic Cadayga Korontada EA310 Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Soojiidasho
Smart 5 habab Adult Sonic Electric Caday EA310
Tikniyoolajiyadda nadiifka ah ee gariirka 'Acoustic vibration': Sonic burushka ku wareegsan 31000 oo istaroog-Ku raaxeyso ilkaha nadiifka ah ee caafimaadka qaba, xafid dhoolla caddeyntaada. Hel nadiifin dhammaystiran oo leh buuq yaraaday, oo si weyn ugu horumariso caafimaadkaaga afkaaga 14 maalmood oo keliya.
Waxyaabaha ABS, PC
Isha Awoodda DC 5V, USB Lacag-bixinta
Nooca Batariga DC 3.7V, 800mAh Batariga Lithium
Biyo-ilaaliye ah IPX7
Cabbirka Badeecadda Φ28 * 255mm
Miisaanka saafiga ah 100g
2.High Tayada Dupont Nylon 612 bristle.
3.5 nooc (Nadiif, Caddaan, Boolish, Milder, Xasaasi) ayaa loo dooran karaa in lagu nadiifiyo iligga.
4.2 daqiiqo saacad iyo 30 ilbiriqsi oo xusuusin ah
5. gariirka 31000 stroke / min
6.100 maalmood runtime ee batteriga ka dib 8-10 saacadood amraya.
7.Rinji gaar ah oo dubista oogada ah si looga fogaado xoqida una muuqato midabada dhalaalaya.
Naqshadeynta nidaamka xakamaynta gaarka ah ee nafteena, u dhigma mootada oo keydso tamarta.
Maxay tahay sababta kuu oggolaanaysa inaad doorato buraashka ilkaha ee korontada ku shaqeeya?
1.Austusic gariirka tiknoolajiyada nadiifka ah: Buraashka ilkaha ee Sonic oo ku wareegsan 31000 oo istaroog-Ku raaxayso ilkaha nadiifka ah ee caafimaadka qaba, xafid dhoola cadeyntaada Hel nadiifin dhammaystiran oo leh buuq yaraaday, oo si weyn ugu horumariso caafimaadkaaga afkaaga 14 maalmood oo keliya.
2.5 NOOCYADA BURASHADA XULASHADA - NADIIF, CAD, POLISH, MILDER, XASAASI AH si ay ugu haboonaato baahiyaha daryeelka caafimaadka ee kala duwan: sida xargaha, buuxinta, taajyada, iyo xuubabka, waxayna ka caawisaa ka hortagga godadka si loo hagaajiyo caafimaadka ciridka.
3. La jaanqaadi kara ilo kasta oo koronto ah, cadaygan korontada ku shaqeeya ayaa si otomaatig ah u xidhi doona ka dib markii la buuxiyay oo lagu dhisay xasuusin batteri yar. Naqshadaynta la qaadan karo iyo nolosha batteriga dheer waxaa taageera USB xukun (adabtarada la'aan) waxayna ku habboon tahay in lagu isticmaalo guriga ama safarka - ku soo qaado safar kasta oo ay ku fududaanayso adabtarada iyo fiilada USB.
4.Waterless: IPX7 biyuhu ma noqon karaan kuwo aad u badbaado adiga iyo burushka ilkaha, su'aal kama taagna xitaa haddii aad isticmaasho caday marka aad qubeysid ama aad biyaha ku nadiifiso.
5. XUSUUSNOW BRISTLE FADING si ay kuu siiso waayo-aragnimo caafimaad iyo caafimaad fayow badan.
Xiga: Wareegtada Safarka Caday ee Safarka CHC001
Xiinka Intelligent Automatic ELectricToothb ...
Baby iyo Carruurta Cute Xiinka Electric Chil ...
2020 Ilkaha Dadka waaweyn ee Sonic Electric Electric Toothbrus ...
Beddelka Isbadalka Elektarooniga ah ee Farsamada ...
Batariga dib loo buuxin karo wuxuu ku shaqeeyaa korantada Sonic T ...
Gacan-siinta Elektaroonigga ah ee Bilaashka ah Ultimate Adult Automatic ...